Himalaya Dainik » कास्कीमा लकडाउनको नयाँ मोडल खोजिँदै…
कास्कीमा निषेधाज्ञाको समयावधि थप गर्ने या अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि आइतबार राति १२ बजे सकिँदै छ । निषेधाज्ञाको पहिलो दिनमा १ सय १०, बिहीबार ६३ र शुक्रबार ११४ जना कारबाहीमा परेका थिए ।
‘भोलि बिहान नगर कोरोना न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसि सकेपछि १/२ बजेतिर जिल्लामा बैठक बसेर टुंगामा पुग्छौं ।’
‘जहाँ जहाँ खतरा बढी छ त्यसलाई कसरी सिल गरेर जाने ? सिल मात्रै गरेर पनि भएन निकास पनि खोजेर जानु प¥यो । त्यही बारेमा हामीले हेर्दै छौं । छलफल गर्दैै छौं,’
मेयर जीसीले निषेधाज्ञाको समयावधि थप्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको धारणा राखे । उनले निषेधाज्ञाको समयावधि थप्ने भन्दा पनि यसको नयाँ मोडालिटीबारे छलफल भई रहेको जानकारी दिए । ‘थप्नु मात्रै समस्याको समाधान हो र ? कसरी तयार पारेर जाने भनेर छलफल गरि रहेको छौं ।
पहिलो कुरा त नागरिकहरु नै स्वअनुशासनमा हुनु प¥यो,’ उनले भने, ‘अर्काले भन्दिएर पनि हुँदैन । गराइ दिएर पनि हुँदैन । कहाँबाट आउँछ कताबाट जान्छ यो त थाहै छैन ।’ आफ्नो सुरक्षाको लागि नागरिक आफैं जवाफदेही बन्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
‘सार्वजनिक बस चलाउँदा पनि अलि बढी भीडभाड नै हुन्छ । यसलाई तत्काल नचलाउने कि भन्ने पनि छ,’
‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अलि कम भएको छ अहिले । मान्छेहरुको चहल पहल नै कम भएपछि त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि अलि कम हुने भो,’ उनले भने, ‘अहिलेको रिजल्ट पत्ता लगाउन एकहप्ता दश दिन हेर्नुपर्छ । ढोका बन्द गर्दा आएन । ढोका खोल्दा फेरि आउन पनि सक्छ । ढोका सबै बन्द गर्न सकिन्न फेरि ।’
‘डिस्चार्ज हुने क्रम पनि चलि रहेको छ । संक्रमित पनि थपिई रहेका छन् । एड्ज्याक्ट भन्न सकिन्न करिब सयको हाराहारिमा एक्टिभ केस छ,’ उनले भने, ‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथबाट डिस्चार्ज हुनु हुँदै छ । यसले संख्यामा थपघट हुन सक्छ । तर, १ सयको हाराहारिमा एक्टिभ केस छ ।’
‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथबाट डिस्चार्ज हुनु हुँदै छ । यसले संख्यामा थपघट हुन सक्छ । तर, १ सयको हाराहारिमा एक्टिभ केस छ ।’
एक्टिभ केस १०५ जना रहेको छ । ‘डिस्चार्ज हुने क्रम पनि चलि रहेको छ । संक्रमित पनि थपिई रहेका छन् । एड्ज्याक्ट भन्न सकिन्न करिब सयको हाराहारिमा एक्टिभ केस छ,’ उनले भने, ‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथबाट डिस्चार्ज हुनु हुँदै छ । यसले संख्यामा थपघट हुन सक्छ । तर, १ सयको हाराहारिमा एक्टिभ केस छ ।’ जिल्ला पशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले सबैको राय, सल्लाह अनुसार आइतबार टुंगामो पुगिने जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञाको पूर्ण पालनः कास्कीमा निषेधाज्ञाको कडाईका साथ पालना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता सुवाह हमालले कडाईका साथ पालना भइरहेको बताए । लकडाउनको समयमा विभिन्न बहाना बनाएर हिँडडुल गरेको पाइए पनि निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा पालना भएको उनले बताए । निषेधाज्ञाको पहिलो दिनमा १ सय १०, बिहीबार ६३ र शुक्रबार ११४ जना कारबाहीमा परेका थिए ।
यस्ता गुण भएका युवती हुन्छन् असाध्यै भाग्यशाली
दुर्गेशको ‘आलु जस्तो गायक’ ट्रेन्डिङ १ मा, दुई दिनमै पायो यती धेरै भ्युअर (भिडियो)